५ बर्ष अगाडि २६ बर्षिया आरतीका लेल जङ्गलमा ह’त्या! बल्ल खुल्यो यस्तो रहस्य! – KhabarTime
२०७२ साल बैशाख १५ गते एक महिलाको लेले फैडोल सामुदायिक वनमा ह’त्या भयो। ती महिलाको शव भने दुई दिनपछि मात्रै फेला परेको थियो। प्रहरीका अनुसार उनको घाँटी का’टिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। शव फेला पर्नेवित्तिकै ती महिलाको सनाखत हुन सकेन। जसकारण प्रहरीलाई अनुसन्धानअघि बढाउन कठिनाइ भएको थियो। इटहरी नगरपालिका ४ बाट ती महिलाकी बुवा सम्पर्कमा आएपछि मात्रै सनाखत भएको थियो।
ती पुरूषहरू सिराहाका २४ वर्षीय रविकुमार यादव र आरतीका ‘श्रीमान्’ थिए। पहिचान भइसक्दासम्ममा उनीहरू भारत भागिसकेका थिए। घटना भएको पाँच वर्षपछि भने महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले बिहीबार १ बजे काठमाडौंको मैतिदेवीबाट रविकुमारलाई पक्राउ गरेको छ।
दिल खड्काको शब्द, संगीतमा ‘सम्झेर सानु’ सार्वजनिक ( भिडियो )
बालुवा झिक्ने क्रममा वालिङमा पुरिएर एकको मृत्यु